Harowo.com | HarawoNews – Somalia Information & Analysis – Socdaalkii Axmed Siilaanyo Ee Gobolka Awdal Iyo Natiijadiisii “Sheeko gaaban”
Socdaalkii Axmed Siilaanyo Ee Gobolka Awdal Iyo Natiijadiisii “Sheeko gaaban”
Nov 25, 2012 ENTERTAINMENT 1
Waxa jiri jiray nin u talinjiray meel, Ninkaasi wuxuu ku caan baxay arxan daro, awood sheegasho, kala qaybin iyo kali noolaansho.
Wakhti wakhtiyada ka mid ah ayuu ninkii dadkii meesha degganaa ku amrey in wixii cad ah isaga la siiyo caanahana iyaga loo daayo.
Dadkii meesha degganaa muddo dheer ayay ka soomanayeen hilibkii xoolohooda, maalin maalmaha ka mida ayaa dadkii koox indheergaradda ayaa u dul qaadan kari wayday dulmiga lagu hayo dadkooda iyo xoolahooga waxayna go`aan ku gadheen in ninkaas loo yeedho loona sheego in sidani dulmi tahay, laguna heshiiyo awood qaybsi dheeli tiran oo ku sahabsan cadka iyo caanaha.
Ninkii markii uu arrintaas maqlay wuu u qaadan waayay, waayo ugama baran dadkan inay diidayba yidhaahdaan, talaa ku ciirtay, bari u carar galbeed u carar iyo xaggan talo ka raadi ayuu ku wareeray, muddo ayay ku qaadatay sidii u dadkaa u hortagi lahaa, waayo wuxu is yidhi dadkan oo ku caan ahaa dulqaad iyo samir marhaddii ay maaanta isa soo taageen kalsooni meesha iima yaallo fadhi.
Waxay arrintu sidii ahaataba maalintii danbe ayuu isagoo caga jiida yimid, kana quusan inuu cad danbe kaligii cuno. Dadkan oo lagu yaqaan marti soor ayaa si sharaf leh u soo dhawaeeyay.
Markii shirkii lays kugu yimid ayuu afhayeenkoodii kacay sidii wax kale looga filayay ayuu ninkii ku yidhi “Waxan kuugu yeedhnay inaan cadkii, caanihiina kuugu darno”. Waxa arintaa la mida sida ummadda ku dhaqan Awdal iyo Salal.
Halkii ay Siilaanyo cadkoodii uga goosan lahayeen ayey Shahaado ugu dareen. Waxanse xasuusinayaa dadkayga maahmaahdii ahayd “Ninkaad kabihiisa sido ayaa kafankaaga sida”.
Filim Ku Saabsan Dilkii Osama Binladen "Daawo Muuqaal Hordhac ah" Faahaahin Muujinaysa Qaabka Lagu Kala Reebayo Beelaha Somaliland Ee Tartamaya
One thought on “Socdaalkii Axmed Siilaanyo Ee Gobolka Awdal Iyo Natiijadiisii “Sheeko gaaban””
daryeel 11/26/2012 at 5:09 am
runtii waa sheeko aad uqurux badan meelo badana taabanaysa laakiin aaway dadkeedii